Maraoka: Naneho Hevitra Momba Ny Daroka Baomba Famonoan-tena Tsy Nahomby Tao Meknes Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2017 1:58 GMT
Herinandro mafapàna tao Maraoka. Voalohany, nisy horohorontany madinika namely ny firenena tamin'ny Alahady alina, ary avy eo fikasana fanaovana vy very aina tamin'ny daroka baomba tao an-tanànan'i Meknes tamin'ny Alatsinainy maraina (tamin'ny volana Aprily ny fikasana farany tahaka izany). Tsikaritry ny tranokalam-baovao Al Bawaba ao Jordania fa i Hisham Dokkali, injeniera 30 taona ilay mpidaroka baomba. Tsy nisy olona maty nandritra ny loza, na dia i Dokkali, tapa-tsandry vokatr'izany aza. Heverina fa nikendry fiara fitaterana mpizahatany nijanona tao akaikin'ny Place Hedim ao afovoan'ny tanànan'i Meknes taloha, na medina izy.
Nampisy fanehoan-kevitra maro isan-karazany ny zava-niseho – bilaogera Myrtus nanontany hoe: “Taiza no nahitan'izy ireo ity olona adala ity?” raha somary tsy matoky kosa ny The Morocco Report:
Mahafinaritra, niala tany Maraoka aho roa herinandro latsaka, ary misy olona miezaka manapoaka tena amin'ny baomba ao amin'ny Place Hedim (afovoan'i Meknes) – kanefa tsy nahomby sy tsy nahavita namono ny tenany akory. Tahaka ny Maraokana mpidaroka baomba mpanao vy very ny ainy fotsiny.
Niteraka fanehoan-kevitra mahaliana ny lahatsoratra farany- tohina i Adilski:
Mihovitrovitra ny zava-drehetra any Maraoka. Ny tany, ny sehatra politika, ny media sy ny olona. Tiako ho fantatra ny ao an-tsain'ity tovolahy mitondra baomba mba hanapoaka tena ity. Ny zavatra tsara dia tsy nisy ny niharam-boina saingy manafintohina fotsiny ny foto-kevitra famonoan-tena eo anivon'ny tanora Maraokana.
Xoussef nisaotra an'Andriamanitra noho ny tsy fahaizan'ny mpanapoaka baomba, ka lasa lavitra mihitsy i Elle nilaza hoe:
Tena tsy mahay izy ireo ka tsy afaka nahazo hafatra akory fa tsy manampy azy ireo hampidi-doza ny olona tsy manan-tsiny i Allah!
Tohina ihany koa i Ange Bleu:
Adala hafa ankoatra ny maro hafa izay mihevitra fa hamaha ny rehetra ny herisetra..
Samuel Gunter ao amin'ny Life Called…, mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps ao Maraoka naneho hevitra tao amin'ny bilaoginy:
Mbola nisy baomba iray hafa tany Maraoka. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy tany amin'ny morontsirak'i Casablanca, tany Meknes, iray amin'ireo tanàna Imperialy. Mba ho mora azonao kokoa … Meknes, na dia akaiky kokoa ny misy ahy noho i Casablanca aza, dia mbola eo amin'ny 140km miala ny misy ahy. Ka, aza manahy ny amiko, fa manahia momba an'i Maraoka ary manahia momba ny tontolontsika, ary raha mivavaka ianareo dia mivavaha ho antsika rehetra.
Isika rehetra dia miady ho an'ny fiainantsika. Miady manohitra ny tsy firaharahiana eo amin'ny fiainantsika manokana izaho sy ianao, ao am-pontsika rehetra ny herin'ny fankahalana sy ny tsy fahalalana. Raha mbola miaina ao anaty tontolo miaraka amin'ny “izahay sy ny izy ireo” isika, dia ho ao anaty ady. Mandra-pahitantsika farany fa tsy misy na inona na inona afa-tsy “isika”, isika hiady mandrakariva. Ireo olona ireo dia miezaka mijoro ao anatin'izany fahabangana izany ary miady amin'ny samy isika sy ny hery hafa mba hampifanatona fianakaviana roa mifampihafahafa, na farafaharatsiny mba hampahatsiahy antsika rehetra fa fianakaviana isika.
Misy hatrany ny fotoam-pisalasalana eto satria toa tsy hita foana indraindray ny maha eo no ho eo.
Sarin'ny Place Hedim (Meknes, Maraoka) avy amin'i Jillian York.